Gudiyo ka socda DF iyo DG oo ku shiraya Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Gudiyo ka socda DF iyo DG oo ku shiraya Baydhabo
Kulankan ayaa loogu gogol-xaari doonaa Shirka uu Farmaajo iclaamiyay 15-ka bishan inay isagu yimaadaan Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Maamulkiisa waqtiga ka dhamaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa la filayaa in Baydhabo Maanta oo Sabti ah ku furmo Shir ay leeyihiin gudiyo ka socda Dowladda Federaalka uu waqtiga ka dhamaadey iyo Dowlad Goboleedyada dalka.
Kulankan oo labada dhinac wali si rasmi ah u shaacin ajandooyinkiisa, ayaa waxaa lagu wadaa in loogu gogol-xaaro Shirka 15-ka bishan Xarunta Xalane ku yeelan doonaan Farmaajo iyo Madaxda Maamullada.
Arrimaha ugu wayn ee kulamada ayaa ah xal u raadinta Khilaafka doorashooyinka Soomaaliya, oo gaarey meeshii ugu sareysay kadib markii qodobada qaarkooda la isku af-garan waayay, oo ugu horeeyo gobolka Gedo.
Farmaajo oo hadda Madaxweyne mudo-xileedkiisu dhamaadey, oo si sharci darro kursiga ugu fadhiya ayaa ku fashilmay in dalka uu gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah, oo loo dhan yahay taasoo la rabey inay billaabato sanadkii tagey dhamaadkiisa.
Axmed Madoobe wuxuu wali ku adkaysanayaa iyadoo aan dib loogu soo wareejin maamulka Gedo inuusan Jubbaland ku qaban doonin wax doorasho ah, waana dalab uu Farmaajo diiday maadaama beeshiisa ay degto gobolka.